ဂျုံပူတင်း( ဖာလူဒါမှာသုံးရန်)/ Flour Pudding (to use in Falooda or Faluda) | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ဝက်နံရိုးမုန့်ခြောက်ကပ်ကြော်/Deep fried pork ribs coated with dried cakecrump
မချန်းလေး(မစုစုလွင်) ရဲ့ အော်ကွေးကျီလုပ်နည်း →
ဂျုံပူတင်း(ဖာလူဒါမှာသုံးရန်)/Flour Pudding (to use in Falooda)
၁၉၉၇_ ၂၀၀၂ ခုနစ် ထိ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းထိပ် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်နားကတိုက်တန်းကြီးအောက် မြေညီထပ်မှာ ” အမှတ်တရ” အအေးဆိုင်ဆိုပြီးသစ်လုံးလေးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆိုင်လေး အမေဖွင့်ဖူးတယ်။ လန်ဒန်မလာခင် ၃နှစ်လောက်ဆိုင်မှာလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုတော့ ထမင်းဆိုင်နဲ့ပေါင်းဖွင့်လိုက်ပြီ။ ကျူရှင် တွေ သင်တန်းတွေကလဲပေါတော့ အရမ်းရောင်းကောင်း ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခါကြီးရက်ကြီးတွေပေါ့နော်။ ဆိုင်မှာဖာလူဒါ ရောင်းအကောင်းဆုံး။ အခုအိသက်ပြောမဲ့ ဂျုံပူတင်းလုပ်နည်း ကဖာလူဒါမှာ သုံးတဲ့ ပူတင်းလေးပေါ့နော်။
Cold drinks restaurant named “A-mhet-ta-ya” meaning “Recollection” designed with timber posts was opened from year 1997-2002 by my mum, located at the top of U Htun Lynn Chan Lane near Hleden Traffic, right under ground floor of big blocks of building. 3-4 years before I came to UK, I was responsible to run the shop. It has now been run under the main restaurant. It was fairly busy I would say as nearby there were so many of tuition classes, training courses etc., especially on gazetted holidays. Falooda was the most favorite drink sold among many others top choices. Now, I am going to share about this Flour Pudding on the process of how to make it as it isafamous ingredient in Falooda.
ပါဝင်ပစ္စည်းများ( ၆ခွက်စာ)/ Contents (6 servings)
– ဂျုံမှုန့် ၃ဇွန်း(စားပွဲတင်ဇွန်း)/-Wheat Flour3spoons (table spoon)
-ကြက်ဥ ၆ လုံး/-6 Eggs
-သကြား ၄ဇွန်း/-4 spoons of table sugar
-ဆား ဇွန်းတဝက်( အချိုစားဇွန်း)/-1/2aspoon of table salt (dessert spoon)
-ဗနီလာနံ့ ၁စက်(မပါလဲရ)/adrop vanilla (just for flavor, not so important if not easily attained)
-နွားနို့ ၁ပိုင့်ခွဲ/1 and half pint of Milk = 750 ml = 0.75 kg =750 liter
အကုန်လုံးရောပြီး blender နဲ့မွှေလိုက်ပါ။
Put all ingredients inacontainer and mix it withablender
ပြီးရင် ပျစ်လာတဲ့အထိ မီးအေးအေးနဲ့ကျိုပေးပါ။ ကြွက်မြီးတန်းလေးပျစ်လာပြီဆိုရင် ထောပတ်သုတ်ပြီးသား မုန့်ဖုတ်မဲ့ ပန်းကန်ထဲ ထဲ့ပြီး ဗန်းထဲကိုရေခံပြီး မုန့်ပန်းကန်ကိုတင်လိုက်ပါ။
And slow cook it until it becomes thicker. The syrupy-looked dripping from the ladle means it is thick enough to put it on the baking tray already buttered then put that tray in the oven tray which has been filled with some water to createasoft base pudding.
Oven ထဲမှာ ၁၅၀ ဒီဂရီ နဲ့ ၁နာရီ ခန့်ဖုတ်လိုက်ပါ။
Bake it in the oven for 150 degree for about an hour. Then, when it cools down, enjoy.
By eithet • Posted in ကိုယ်တိုင်လုပ်စားဖွယ်, မြန်မာမုန့်များ
55 comments on “ဂျုံပူတင်း( ဖာလူဒါမှာသုံးရန်)/ Flour Pudding (to use in Falooda or Faluda)”
ma mie ( myint myint thein )
26/02/2012 @ 3:45 am
26/02/2012 @ 9:46 am
မမီး လုပ်စားကြည့် အရမ်းစားကောင်းတယ် မ။ကျေးဇူးနော်။
26/02/2012 @ 1:44 pm
27/02/2012 @ 7:41 am
Very nice. Will try to make it soon. Thanks for sharing 🙂
28/02/2012 @ 10:24 am
thank you for watching naw. after you try pls let me know if it is ok or not. 🙂
28/02/2012 @ 7:53 pm
မနေ့က လုပ်စားကြည့်တယ်အမရေ အရမ်းစားလို့ကောင်းတာပဲ ပူတင်းလုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော် 😀
28/02/2012 @ 8:11 pm
အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ညီမလေးရေ။ပြန်ပြောပြလို့လဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။ 🙂
29/02/2012 @ 3:17 pm
လုပ်ကြည့်အုံးမယ် အိသက်တို့ ဆိုင်ရဲ့ တကယ့် Professional နည်းနဲ့။ ခါတိုင်းက စာအုပ်ဖတ်ပြီး လုပ်ပေမယ့် သိပ်စိတ်တိုင်းမကျဘူး။ အင်း ပိန်အုံးမယ့် အရေးတွေးပြီး ရင်လေးမိသေးတယ် 😀 ;D
29/02/2012 @ 8:12 pm
လုပ်စားပြီးရင် အဆင်ပြေလား ပြောပြပါဦးနော် Evyကကိက်လုပ်တာဒီလောက်တော်တာ ဒါမျိုးဆိုပိုတောင်တော်ဦးမယ်။ 🙂
06/03/2012 @ 3:53 am
06/03/2012 @ 9:53 am
နွားနို့2ပိုင့် = 1ကီလိုရှိပါတယ် 🙂
06/03/2012 @ 2:36 pm
06/03/2012 @ 3:30 pm
08/03/2012 @ 5:18 pm
လုပ်စားကြည့်ပြီးပြီ သူငယ်ချင်းေ၇… ဖြစ်တယ်တော့
08/03/2012 @ 6:30 pm
့္ဗဝမ်းသာပါတယ် သူငယ်ချင်ရယ်. 🙂
06/04/2012 @ 8:48 am
အရမ်းစားလို့ကောင်းတာပဲ ပူတင်းလုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါတယ် မအိသက်
07/04/2012 @ 12:50 am
I am glad u like it:)
07/04/2012 @ 3:27 pm
Hi sis , thanks for this flour pudding recipes . I will make it today 🙂
23/04/2012 @ 2:38 am
Ma, Can you tell me, what’s your tray size? Thanks 🙂
23/04/2012 @ 11:05 pm
6 by6inches, deep is2inches 🙂
01/05/2012 @ 4:33 am
I tried … but it is really soft … i wantabit hard … how long do I need to boil?
01/05/2012 @ 7:02 pm
untilabit sticky sis .
04/05/2012 @ 9:30 am
MA …july lote kyi tar…putinatar ka pwa pwa gyi phit nay tal…kyit kyit lay phit aung bal lo lote ya ma lal ?….
04/05/2012 @ 11:22 am
04/05/2012 @ 11:25 am
ကျိုတာလို လို့ထင်တယ်နော် 🙂
04/05/2012 @ 11:25 pm
thank you MA….pyan try kyi mal….:)
05/05/2012 @ 2:50 pm
ok nyi ma lay 🙂
30/06/2012 @ 9:11 pm
Hi Ei Thet, i made the pudding for falooda yesterday. came out really good. thanks for sharing. will be trying more of your burmese desserts soon.
30/06/2012 @ 11:25 pm
i am so happy you like that 🙂
29/08/2012 @ 9:37 am
မမ အိသက်ရဲ့ပူတင်းလုပ်နည်း လေးအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ၁နှစ်ခွဲအရွယ်ခလေးရှိတော့ သူစားလို့ရတာလေးတွေရှာပြီးလုပ်ပေးနေရတယ်။ မမရော ကလေးတွေ ဒီအရွယ်တုန်းက ဘာတွေချက်ကျွှေးလဲဟင်? ကလေးကျွှေးလို့ရတာလေးတွေ တင်ပေးပါဦးနော်။
30/08/2012 @ 11:45 am
ကျိုတဲ့အချိန်မွှေရလားဟင် .. ကျစ်ကျစ်လေးမဖြစ်လို့ ..
30/08/2012 @ 5:37 pm
hote stiring constantly until thick 🙂
30/08/2012 @ 6:22 pm
မမ … နွားနို့က အပျစ်ကို ပြောတာလားဟင်? ငယ်တို့ breakfast သောက်တဲ့ နွားနို့ (2% reduced fat milk) ဆို လုပ်လို့ ရမလား?
31/08/2012 @ 9:32 am
yes nyi ma whole milk can be done 🙂
25/09/2012 @ 2:54 am
မမ …. ငယ် လုပ်စားပြီးပြီ၊ အိမ်မှာက 2% reduced fat milk ပဲ ရှိနေတော့ အဲဒါနဲ့ လုပ်လိုက်တာ၊ ခပ်ပျော့ပျော့ပူတင်း ဖြစ်သွားပေမဲ့ စားလို့အရမ်းကောင်းတာပဲ၊ bread နဲ့ တွဲပြီး breakfast အနေနဲ့ စားရတာလဲ အဆင်ပြေတယ်၊ ကျေးဇူးပါ မမ 🙂
25/09/2012 @ 1:09 pm
Thanks for let me know back 🙂
11/09/2012 @ 7:31 am
အမေ၇ ပူတင်းလုပ်နည်းကိုပဲ မုန့်ဖုန့်စက်မ၇ှိ၇င် ၇ိုး၇ိုးမီးဖိုနဲ့ေ၇ာ လုပ်လို့၇မယ့်နည်းလေးတင်ပေးပါလား။ကျေးဇူးပါပဲ။
17/09/2012 @ 10:15 pm
Really good ma.Thank for your recipes.
28/09/2012 @ 5:28 am
မအိသက်ရေ ကျေးဇူးနော်။မုန့် လုပ်နည်းတွေအများကြီးယူထားတာ။
မုန့် လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။စိတ်အဆင်ချမ်းမြေ့ ပါစေနော်။
welcome and thanksalot for your wish naw 🙂
30/10/2012 @ 12:08 pm
ပူတင်းလုပ်နည်းကိုပဲ မုန့်ဖုန့်စက်မ၇ှိပဲ ၇ိုး၇ိုးမီးဖိုနဲ့ေ၇ာ လုပ်လို့၇လား??ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ အမ
31/10/2012 @ 12:14 am
ဟုတ် အိုးအဖုံးပေါ်ကို မီးသွေးမီးအေးအေးတင်ပြီးဖုတ်လို့ရပါတယ်နော်။ အိသက်တို့ ဓနူဖြူဆိုင်မှာအဲလိုဖုတ်ပါတယ် 🙂
17/01/2013 @ 2:32 pm
Hi ma ei thet
Can you pls tell me is the flour self raising or plain flour? Thank you bar.
17/01/2013 @ 3:55 pm
it is wheat flour nyi ma lay 🙂
05/04/2013 @ 12:07 pm
Can I sub wheat flour with wholegrain or whole wheat flour? And white sugar with brown sugar? milk with skimmed milk or almond milk?
I’m trying to errr… watch my diet and I still want to make and eat this! It looks so yummy!
15/06/2013 @ 3:52 am
နွားနို့ ၁ပိုင့်က ဘယ် နှစ်ကျပ်သားလဲဟင်
15/09/2013 @ 11:13 am
ကျိုလိုက်ရင် အရည်က ချောမွတ်မနေဘဲ အဖတ်ဖတ်တွေ လိပ်တက်လာတာ ပြန်အပူပေးတဲ့အခါ မွတ်မနေဘဲ ပွစိစိတွေဖြစ်တာ ဘာမှားလဲမသိလို့ ပါ
15/09/2013 @ 9:23 pm
မကျိုခင် မွှေတာများနဲလို့လား။ နောက်ပြီး မီးမျင်းမျင်းနဲ့ ကျိုရပါတယ်။ မီးပြင်းရင်လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်
03/01/2014 @ 5:15 am
06/01/2014 @ 2:49 am
thanksalot Hninzee 🙂
02/04/2014 @ 2:38 am
မအိသက်ရေ၊ အပူချိန် ၁၅၀ ဒီဂရီက Celsius လား Fahrenheit လားဟင်။ ကျေးဇူးပါ 🙂
03/04/2014 @ 10:50 pm
degree Celsius par
Khin Mya Aye
11/08/2014 @ 6:26 am
Oven မရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။please .——
12/08/2014 @ 12:54 am
အပေါ်က ဒန်အိုကဖုံး ဖုံးပြီး မီးသွေး တင်ဖုတ်လို့ရပါတယ်
LeaveaReply to memezin Cancel reply